DAWO MUUQAAL: ”Xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi haday si toos ah u go’aansatay inay hoostagto dowlada Farmaajo , shacabka ha u sheegaan”! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAWO MUUQAAL: ”Xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi haday si toos ah u...
DAWO MUUQAAL: ”Xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi haday si toos ah u go’aansatay inay hoostagto dowlada Farmaajo , shacabka ha u sheegaan”!
Hargeysa (Halqaran.com) – Xoghayaha duulista Xisbiga Waddani, Nuuradiin Cabdullaahi Diini oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si adag u weeraray xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi.
Nuuradiin Cabdullaahi Diini, ayaa sheegay in Xukuumadda Muuse Biixi ay ka gaabiyay inay raadinayo dhaqaalihii duuliyaadyada diyuuradaha uu tilmaayay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in ay gabi ahaan maamulka hawada ay lawareegto.
”Xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi haday si toos ah u damacay inay hoostagto dowladda Farmaajo, maxay dadka ugu sheegi waayeen”, ayuu yiri Xoghayaha duulista Xisbita Waddani.
Wuxuu kaloo yiri xoghayaha duulista Xisbiga Waddani, ”Somaliland iyadaa korineysa maamulladii ka jiray Soomaaliya, taasi baana marqaati ka ah wax walba”,
Hoos ka daawo Muuqaalka Xoghayaha duulista Xisbiga Waddani:
Nuuradiin Cabdullaahi Diini
Xoghayaha duulista iyo hawada